Shiinaha wax soosaarka waxtarka sare leh ee 'Alkyl polyglucoside' 50% -70% APG 0810 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Aragtida
Wax-ku-ool sare oo firfircoon Alkyl polyglucoside 50% -70% APG 0810 cas 68515-73-1
NATURAL APG 0810 waa mid si fudud u ficil yar oo nonionic ah oo laga sameeyay alaabta ceyriinka ah ee la cusbooneysiin karo, taas oo sun yar tahay, aan xanaaq lahayn oo si dhaqso ah u noolaan karta. Waa waxqabad aad u fiican oo ay ku jiraan ka hortag, qoyn, kala firdhin iyo iswaafajin, gaar ahaan hantida xumbada. Waxay sidoo kale soo bandhigtaa cawaaqib xumo iyo u adkaysi la'aanta aaladda iyo maadooyinka kale. PH waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo la raacayo baahida macaamiisha.
Magaca Badeecada: APG 0810
Fasalka: 50% - 70%
Qaabka Wax Soo Saarka: APG 0810
Xalka aqueous ee polyglucosides alkyl oo ku saleysan aalkolada dufanka dabiiciga ah C8 - C10
INCI magaca: Capryl Glucoside CAS-Maya.: 68515-73-1
Erayo la mid ah: Decyl Glucoside Muuqaal: Dareere huruud ah oo huruud ah
NATURAL APG 0810 waa mid si fudud u ficil yar oo nonionic ah oo laga sameeyay alaabta ceyriinka ah ee la cusbooneysiin karo, taas oo sun yar tahay, aan xanaaq lahayn oo si dhaqso ah u noolaan karta. Waa waxqabad aad u fiican oo ay ku jiraan ka hortag, qoyn, kala firdhin iyo iswaafajin, gaar ahaan hantida xumbada. Waxay sidoo kale soo bandhigtaa cawaaqib xumo iyo u adkaysi la'aanta aaladda iyo maadooyinka kale.
PH waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo la raacayo baahida macaamiisha.
Qaabka Wax Soo Saarka: APG0814
Xalka aqueous ee polyglucosides alkyl oo ku saleysan aalkolada dufanka dabiiciga ah C8 - C14
INCI magaca: Coco Glucoside
Muuqaalka: Jaale, xoogaa daruuro iyo dareeraha dareeraha ah NATURALAPG 0814 waxay soo bandhigaysaa dabeecad heerkulkeedu hooseeyo oo hagaagsan. Maaddaama ay ka kooban tahay silsilada 'alkyl silkoskosides' hoose, NATURALAPG 0814 waa la keydin karaa laguna shaqeyn karaa qeybta hoose
heerarka heerkulka (> 5°C).
NATURALAPG 0814 si fudud ayaa loo diyaarin karaa maxaa yeelay ma muujineyso waji gel marka la milo. Adoo yareynaya qiimaha pH, tusaale ahaan, iyadoo aysiidhada ka hooseyso 8.5 daruuraha qaaska u ah badeecada ayaa baaba'eysa sidaas oo kale waxay awood u siineysaa sameynta alaabooyin cad. Xalalka Aqueous ee NATURALAPG 0814 laguma cabi karo isku darka NaCl. Marka lagu daro waxyaalaha loo yaqaan 'anionic surfactants' isku-darka viscosity-ka waxaa lagu horumarin karaa iyadoo lagu daro elektroolka.
Qaabka Wax Soo Saarka: APG1214
C12 - C14 aalkolo dufan leh glucoside
Magaca INCI: Lauryl Glucoside
Muuqaalka: xoogaa daruur iyo dareere dareeraha Dhibaatada badeecada ayaa loo aaneynayaa isku darka maadada magnesium oxide (ugu badnaan 600 ppm magnesium) iyo qiimaha pH ee lagu bixiyo. Dhibaatadaani wax saameyn ah kuma lahan astaamaha alaabta waxayna baaba'aysaa haddii qiimaha pH-ka lagu hagaajiyo wax ka hooseeya 7. NATURALAPG 1214 waa shey aan faafiye aheyn oo leh is-waafajinta maqaarka iyo saameynta kor u qaadista isku-darka. Sidaa darteed waxay ku habboon tahay in loo isticmaalo sidii wax lagu daro ama la-hawlgalayaal ku jira diyaarinta nadiifinta alaabada la isku qurxiyo.
25kg / durbaan, 200kg / durbaan, 900kg / IBC TANK
Dareeraha Jaalaha ah ee Fudud
Qiimaha pH (20% 15% IPA aq.)
Viscosity (mPa · s, 25 ℃)
Khamriga dufanka bilaashka ah (%)
Waxyaabaha dambasku ku badan yahay (%)
Cufnaanta (g / cm3, 25 ℃)
Hore: Emulsifier wax ku ool ah CO40 Ethoxylated hydrogenated castor saliid CAS 61788-85-0
Xiga: Benzalkonium Chloride (ADBAC / BKC 50%, 80%) cas 8001-54-5 ama 63449-41-2
Warshadda Shiinaha waxay siisaa qiimo wanaagsan 99% DMA Dimethyl ...
Qiime wanaagsan Cocamide DEA / cocamide diethanolamin ...
Qiimo wanaagsan 99% Sodium tert-butoxide cas 865-48-5
Qiimaha wanaagsan antioxidant HN-130 CAS 69938-76-7
Tayo sare leh 99% iyo 99.5% pentoxide vanadium (...
fasalka sare 99.9% tantalum (v) budada chloride Ta ...